Beesha caalamka oo ka walaacsan isbadaladii siyaasadeed ee…
Saaxiibada beesha Caalamka ee taageera Xukumadda Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay isbadaladii siyaasadeed dhawaan ka dhacay dalka, oo ay ka mid tahay tii baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay xilka kaga xayuubiyeen Xasan Cali Kheyre iyo Xukumadiisa Madaxweynuhuna u aqbalay sida dhaqsaha leh.
Waxa ay ka digeen in talaabooyinkaasi ay wiiqaan dadaallada lagu gaarayo isafgarad siyaasadeed oo ku saabsan doorashooyinka waqtigaysan, carqaladeeya ajandaha dib-u-habeeynta Soomaaliya, ama abuuritaanka xasillooni darro dib u celin karta guulihii ilaa iyo hadda la gaaray ee muhiimadaha u lahaa dib u dhiska qaranka.
“Saaxiibada Soomaaliya waxa ay si wadajir ah ugu baaqeen wadatashiyo loo wada dhan yahay si loo gaadho heshiis sal ballaadhan oo ku saabsan qaab dhismeedka doorashada 2020. Tani waa sababta ay u soo dhoweeyeen go’aannadii ay gaareen hoggaamiyaasha Federaalka iyo Dowlad-gobolleedyada ee ka dhacay Dhuusamareb 22-kii Luulyo oo ah tallaabo muhiim u ah yoolkaas” ayaa lagu yiri bayaanka oo ay aragtay Axadle.
Beesha Caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in madaxda Xukumadda federaalka iyo kuwa dowlad-goboleedku ay ixtiraamaan heshiisyadii 22-kii Luulyo lagu gaaray Dhuusamareb iyo waqtiga loo qabtay shirarka ay iskugu imaanayaan Hogamiyayaasha Xukumadda Federaalka, Dowladaha xubinta ka ah federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiillada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa ka digtay talaabo kaste oo koox gaar ah isku kali yeelayso arimaha masiiriga ah ee Soomaaliya sida cad bayaanka.
“Isku day kasta oo ay yeeshaan hal dhinac oo isku kali yeella qaababka doorashada waxa iu dhimayaa sharci ahaanshaheeda, lamana dhaqan gelin doono haddii aan laga helin taageerada lagama maarmaanka ah dhinacyada kale ee daneeya. Beesha caalamku waxa ay si dhow ula socon doona horumarka horay u socda” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Ka go’naanta arrimaha mudnaanta leh ee la isku raacay iyo xallinta arrimaha muuhiim ah iyada oo loo marayo wadahadal iyo isu tanaasul ayaa muhiim u ah sii wadista taageerada caalamiga ah ee Soomaaliya ee heerarka hadda jira” ayaa ku xusan qoraalka wadajirka ah.
Beesha caalamka ayaa ku boorisay dhamaan dhinacyada in ay magacaabaan xubnaha guddiga FGS-FMS si ay ugu diyaar garoobaan fududeynta shaqadooda, si loo dhammeeyo ka talabixinta arimaha doorashooyinka dalka ka hor shirka Dhuusamareeb loo balansanyahay bartamaha Augost 2020.
War-Saxaafadeedka ayaa waxaa si wadajir u soo saaray Austria, Belgium, Canada, Denmark, European Union, Finland, France, Germany, IGAD, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Netherlands, Norway, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Qatar, Spain, Switzerland, Sweden, UK , Maraykanka iyo Qaramada Midoobay.